Nasehon’ny Karatra Paositaly Fahiny Ny Tsiaron’ny Ady Lehibe Voalohany Tao Makedonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2016 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Português, বাংলা, Español, English
Karatra paositra alemana tamin'ny ady lehibe voalohany ahitana an'i Ohrid, Makedonia. Saripika avy amin'ny Tranombokim-bahoakan'i New York.
Tamin'ity Janoary 2016 ity ny Tranombokim-Bahoakan'i New York namoaka votoaty na fitaovana navadika ho nomerika mihoatra ny 180.000 ho lasa any amin'ny vala azon'ny rehetra ampiasaina. Maro tamin'ireo fitaovana ao amin'ny tranomboky ireo no tahirin-kevitra ara-tantara izay ato atao loharanon-kevitra amin'ny fampianarana akademika, ary azo trohana sy ampiasaina ary atambarambatra rehefa lany andro ny fizaka-manana mihatra aminy.
Efa nanasongadina votoaty fahiny efa navoakan'ity tranomboky ity misy ifandraisany amin'i Vietnam, Japan ary i India ny Global Voices. Loharanom-botoaty mety mahaliana an'i Eoropa ireo angona Sarin-karatra paositra alemana nandritra ny ady lehibe voalohany. Natao tanelanelan'ny taona 1914 ka hatramin'ny 1918, tsy ny fampisehoana ny endrika ara-miaramila ny ady ihany no hita amin'ny sary, fa asehony ihany koa ny toerana sy ny olona tafiditra ao anatin'ny ranomodiny.
Mivaky toy izao ny karatra am-paositra misongadina etsy ambony:
Manda elan'i Ohrid (Makedonia). Ampahany amin'ny moron'ny farihin'i Ohrid anjakan'ny hantsam-batolampy. Ery an-damosina ny tendrombohitra Albaniana feno ranomandry.
Raha ny marina dia any an-damosin'ny mpaka sary fa tsy amin'ity sary ity ny tangoron-tendrombohitra Albaniana. Ny tendrombohitra ity ao an-damosina dia i Galichica, izay valan-javaboarimpirenena ahiana ho potika [mg] amin'izao fotoana izao.
Fanankotrihina tamin'ny 1 febroary 2016: Nisy sary nopihana tamin'io toerana io ihany nivoaka zato taona taty aoriana, tamin'ny Janoary 2016, mampiseho ny niova sy ny tsy niova.
Moron'i Kaneo ao Ohrid, Makedonia, Janoary 2016. Saripikan'i F. Stojanovski (CC-BY).
Namoaka ny “voatra” manakaiky kokoa antsika amin'ity sary ity i Dejan2008 mpisera Panoramio, izay nopihana manakaiky dia akaiky ny toerana hita amin'ny sary voalohany. Amin'izao fotoana izao dia ampiasaina ho moron-dranomasina [fitsangatsanganana] ity toerana misy hantsam-batolampy ity mandritra ireo volana asara [mafana].
Raha iray amin'ireo tanim-piadiana lehibe indrindra nandritra ny ady lehibe voalohany i Makedonia (ny “Vava Ady Makedoniana“), ireo tantaram-pirenena sy tantara eny ifotony mifandraika amin'ity fotoana ity kosa dia tsy fantatry ny taranaka taty aoriana loatra. Mba hamadihana izany fironan-tsy fahalalàna izany, ny Open Society Foundation Macedonia tamin'ny 2008 dia namoaka angon-taratasy nosoratan'ny miaramila avy tao Makedonia navadika ho nomerika. Makedonia izay nandrafitra ireo tafiky ny firenena manodidina an-tany fiadiana tamin'izany fotoana izany toa an'i Bolgaria, Serbia, Gresy. Toy izao ny fivakin'ny taratasy iray avy ao amin'io angon-taratasy io, izay nantsoina hoe “Fijoroana Vavolombelona Naboraka” :
“Nifampiresaka izahay fa tsy hisy farany ity ady ity. Tsy maintsy nanoratra taratasy aho, ka isan'andro dia miangavy olona isan-karazany hanoratra ny taratasiko. Tsy misy na iray aza mahasoratra araka izay notadiaviko. Efa nianatra tarehintsoratra sasantsasany amin'ny abidia aho ary nianatra nanoratra, ka ny sisa tavela tamin'ny ady dia ny fahafahako nanoratra taratasy, na dia be aza ny fahadisoana tao anatiny.” – Ilija Stanoev
Andia-tafika alemana nilasy tany amin'ny manodidina an'i Skopje tany amin'ireo tranon'ny foko Albaniana tao an-toerana. Sary avy amin'ny tahiry nomerikan'ny Tranombokim-bahoakan'i New York.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, tanatin'ny ezaka hampiroboroboana ny fahatsiarovana sy ny fampihavanana ny faritr'i Normandie Ambany ao Frantsa sy i Makedonia dia niara-nanomana fampirantiana iray manamarika ny fahazato taona ny Ady Lehibe Voalohany, sy tsidika arahim-pianarana sy fizahana ny lovan-kolontsaina sisa tavela tamin'ny vava ady taloha.
Ny karatra paositra alemana navoakan'ny Tranombokim-bahoakan'i New York dia manome topimaso ny fiainan'ny olon-tsotra ary ampiasaina ho vavolombelon'ny fimaroam-poko mampiavaka an'i Makedonia amin'izao fotoana izao. Mety hanome aingam-panahy ireo mpikaroka amin'ny taranja isan-karazany mizaha ny fahiny koa ireo, na amin'ny ethnografia na amin'ny historiografia.
Vondrom-poko isankarazany maneho ireo fomba fitafy samy manana ny azo ao amin'ny tsena iray ao Skopje nandritra ny ady lehibe voalohany. Sary avy amin'ny tahiry nomerikan'ny Tranombokim-bahoakan'i New York.